Afuura Kee Dhabne ! – Welcome to bilisummaa
Afuura Kee Dhabne !
bilisummaa October 19, 2014	1 Comment
Bakki jirtu eessaa?
Biyya tamii laata
Dhiira onnee guutuu
Leenca ija barbadaa
Yoomuu hin Cal’ifnee
Lammiin si iyyaafataa
Afuura kee dhabnee
Jaal Nadhii Gammadaa!
Baatee achi geettee,
Kankee quba dhabee
Jaallaan miiltoo keetii
Nama heddu gaaffee
Hunduu hin arginee
Gumaan kee hin baduu
Rabbiin haa deebisuu
Waan gootummaa keetii
Akkanatti ibsu :-
Goota onnee guutuu
Duuti isaaf dhuftee
Anaani haa qaarituu
Isaa namaan addaa
Diina haamee fixaa
Ciree akka hadaa!
Abjuu natti ta’ee
Achi buuteeni isaa
Mee na hin gaafatinii
Afaan maaliin ibsaa?
Waan jedhuu hin qabuu
Seenaa dhumaaf dhiisaa!
Naan jedhe jaal tokkoo
Kan duri beeku isa !!!
Tags Nadhii Gammadaa
Previous Gabaasa Kabajaa Ayyaana Waggaa 50ffaa Waldaa Meccaa-Tuulamaa fi Ayyaana Irrecha Magaala Nürnberg biyyaa Jarmaniitti kabjame
Next Filannoo fi Itoophiyaa (Kutaa 3ffaa)
Vicious cycle of political conflict hindered realization of democracy via development of antagonistic ideologies in Ethiopia (1870 – 2020)
*By Malkamuu Jaatee, June 2020 Introduction The vicious cycle of political conflict sustained in Ethiopia …
Jaalle nadhiin qabsaawaa dhugaati.
Warra Mallas Zenaawii vizaa fi maallaqa kenneefii Booleen gadgeesseetu, Jaal Nadhiin bakka jiruu diinaaf himee, diinni achitti dhaqee galaafate.
Seenaan isa haa yaadatu!